पहेलो संसार, एक खूनी परीक्षण को एक महान शिक्षण उत्पादन | वर्तमान साहित्य
अल्बर्ट एस्पिनोसा द्वारा उद्धृत।
२०० 2008 मा स्पेनिश लेखक अल्बर्ट एस्पिनोसा प्रकाशित भयो पहेलो संसारलेखक आफैले भनेका पुस्तक स्वयं सहायता होइन। यो गाह्रो अनुभव र क्यान्सर बिरुद्दको दश बर्षे लडाई द्वारा सिकेको अनुभव को बारे मा एक लामो प्रशंसापत्र हो। यस तरिकाले, लेखकले एक कथा रचना गर्दछ जसमा उनले "अन्य यल्लो" पहिचान गर्दछ, पाठकको लागि घनिष्ट र धेरै रमाइलो शैलीको साथ।
तसर्थ, शुरू देखि नै, एक पूरै पहेंलो जीवन को विचार केही हदसम्म उल्लेखनीय तत्व छ। मेरो मतलब, किन त्यो विशेष रंग? जे भए पनि, एस्पिनोसाले रोगको परम्परागत लांछनहरू तोड्न सक्ने परिप्रेक्ष्य उजागर गर्दछ। जहाँ - मानव अस्तित्वको परिवर्तनको बावजुद - वर्तमानमा आफूलाई डुबाउन महत्त्वपूर्ण छ, मृत्युको डर बिना।
1 लेखकको बारेमा, अल्बर्ट एस्पिनोसा
1.1 प्रतिकूलताको सामना गर्ने मनोवृत्ति
1.2.2 चलचित्र र टेलिभिजन
1.3 तपाईंको जीवनको साहित्यिक पक्ष
2 कामको विश्लेषण
2.1 पहेलो संसार किन? (महान कारण)
2.2 लेखकको पाठकलाई आमन्त्रित
2.3 सबै चीज अस्थायी हुन्छ, बिरामीसमेत
2.3.1 पुस्तकको वैधता
3.1 इच्छा कुराकानी छैन
लेखकको बारेमा, अल्बर्ट एस्पिनोसा
फिल्म स्क्रिप्टका लेखक, नाटकीय टुक्राहरूको लेखक, अभिनेता र स्पेनिश उपन्यासकार, नोभेम्बर,, १5.1973 मा बार्सिलोनामा जन्मनुभएको थियो। यद्यपि उनी औद्योगिक इन्जिनियरको रूपमा प्रशिक्षित थिए, उनले आफ्नो जीवन कलाको लागि समर्पित गरे, सिनेमा र मञ्चमा धेरै बदनाम प्राप्त गरे।.
प्रतिकूलताको सामना गर्ने मनोवृत्ति
१in वर्षको उमेरमा एशिनोसाको जीवनमा एउटा खुट्टामा एउटा अस्टियोसर्कोमाको निदानपछि आमूल परिवर्तन भयो। यस अवस्थाले उनलाई एक दशक भन्दा बढी समयसम्म प्रभावित गर्यो, यद्यपि उनी १ of वर्षको उमेरमा क्याटालोनियाको पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरे। यसैबीच - क्यान्सर मेटास्टेससका कारण - उनले एउटा खुट्टा र कलेजोको केही अंश हटाउने काट्नुपर्‍यो।
एस्पिनोसाको स्वास्थ्य अवस्थाले पछि थियेटर वा टेलिभिजनका लागि साहित्यिक टुक्राको सिर्जना गर्ने उद्देश्यको रूपमा काम गर्‍यो।। साथै, ईन्जिनियरि studying पढ्दा (अझै पनि क्यान्सरसँग लड्दै), उहाँ एक थिएटर समूहको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ, लेखकको रूपमा उहाँको पहिलो अभिव्यक्तिहरू आउनुहोस्, सब भन्दा बढि आफ्नो जीवनबाट प्रेरित।
सुरुमा, एस्पिनोसाले थिएटर लिपिहरू लेखे। पछि, मा एक अभिनेता को रूप मा भाग लिए Pelones, उनको लेखकत्व को एक नाटकीय टुक्रा क्यान्सर संग उनको अनुभव द्वारा प्रेरित। उही तरीकामा, त्यो शीर्षक एक थिएटर कम्पनी को नाम को रूप मा काम गर्‍यो जुन उनले आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर स्थापना गरे।
२ 24 वर्षको उमेरमा उनले टेलिभिजनमा विशेष गरी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा स्क्रिप्ट लेखकको रूपमा यात्रा सुरु गरे। आधा दशक पछि, क्याटालान लेखक जब उनले फिल्मको लागि पटकथा लेखकको काम पूरा गरे तब उनी परिचित हुन सके चौथो तला (2003)। यस फिल्मबाट, एस्पिनोसाले आफूलाई ठूलो स्क्रिनमा स्थापित गरे र पछिल्ला बर्षहरूमा नाटकीय स्क्रिप्ट लेखक र नाटककारको रूपमा पुरस्कारहरू प्राप्त गरे।
तपाईंको जीवनको साहित्यिक पक्ष
२००० को बीचमा, अल्बर्ट एस्पिनोसा स्पेनिश कलात्मक संसारमा आफ्नो नाटकीय, टेलिभिजन र सिनेमेटोग्राफिक कार्यहरूको लागि पहिल्यै मान्यता पाइसकेका थिए, तर उनी अझ बढी चाहन्थे। त्यसो भए, २०० 2008 मा उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास जारी गरे, पहेलो संसार. निम्न बर्षहरूमा पुस्तक प्रकाशन गर्न रोकेको छैन, ति मध्ये, बाहिर खडा:
यदि तपाइँ मलाई भन्नुहोस्, आउनुहोस्, म सबै छोड्छु ... तर मलाई भन्नुहोस्, आउनुहोस् (2011)
निलो संसार: आफ्नो अराजकतालाई प्रेम गर्नुहोस् (2015)
यदि तिनीहरूले हामीलाई हराउन सिकाए हामी जित्ने छौं (2020)
किन पहेलो संसार? (महान कारण)
यो पुस्तक सामान्यतया वर्गीकृत गरिएको छ आत्म सहयोग पाठमा घोषणा गरिएको सन्देशको कारण। किनभने पाठको कोर मित्रताको मूल्यको वरिपरि घुम्छ, वर्तमानमा बाँच्दै, प्रत्येक वास्तविकताको सकारात्मक पक्षलाई हेरेर, परिस्थितिले जति चित्रण गर्न सक्दछ ... यो गर्न, काँडादार, बरु घनिष्ट दृष्टिकोणबाट, एकअर्काको अस्तित्व बुझ्ने र बुझ्ने मौलिक तरिका बनाउनुहोस्।
त्यसकारण, यो कुनै पीडादायी कथा होइन (जस्तो कि क्यान्सर बिरामीको बारेमा सोच्न सक्छ), किनभने यस तर्कले प्रत्येक मानवलाई पार गर्ने इच्छामा केन्द्रित छ। त्यो बाटोमा काँडादार उनी आफ्नो अनुभवको सकारात्मक पक्ष देखाउँछिन् - यति कम गाह्रो - कथाको यथार्थवादबाट विमुख हुने गहना प्रयोग नगरी।
पहेलो विश्व: हो ...
लेखकको पाठकलाई आमन्त्रित
कथाको अन्तमा, दर्शकलाई निम्न प्रश्न सोधिन्छ: के तपाईं पहेलो बनाउन चाहनुहुन्छ? यद्यपि यो स्पष्ट पार्नु पर्छ "पहेंलो" यो दुर्भाग्यप्रतिको दृष्टिकोण भन्दा बढी हो। वास्तवमा त्यो रंग यो पनि एक न्यानो, उज्ज्वल स्थान को प्रतिनिधित्व गर्दछ, जहाँ प्रत्येक झटका सिकने अवसर हो, बढ्न र अधिक शक्ति संग अग्रिम।
सबै चीज अस्थायी हुन्छ, बिरामीसमेत
रोगले एक स्थायी परिस्थितिलाई दर्साउँछ (बिभिन्न चीजहरू र जीवनमा मानिसहरू जस्तै)। यद्यपि यसले अत्यन्त कठोर चिकित्सा अवस्थाको परिणामलाई वेवास्ता गर्दैन, सब थोरैमा लेबल "ईफिमेरल" राख्छ।। यो कुरा सम्झनु पर्छ कि कथाको नायकले एउटा अंग र केही अंगहरू पनि हराउँछ।
२०२० को इतिहासमा कोविड १ of को उदयको अभिलाषाको रूपमा तल झर्नेछ। यो विश्वव्यापी महामारी मानवता को सम्झनाको रूपमा लिन सकिन्छ: तपाईंले वर्तमानको कदर गर्नुपर्नेछ र प्रियजनहरूलाई स्नेह देखाउनुहोस्। तसर्थ, मा मानव सम्बन्ध मा सम्बन्धित मुद्दाहरु मा एस्पिनोसाको दृष्टिकोण बेवास्ता गर्न असम्भव छ पहेलो संसार.
अल्बर्ट एस्पिनोसाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था उनलाई वर्णन गरेको क्षणबाट नै विश्वको आफ्नो दर्शन नवीकरण गर्ने निर्णय गर्दछन्। तसर्थ, एक सम्पूर्ण दुनिया बनाउन को प्रस्ताव छ कि उहाँ पहेलो कल। नियमित मा, वर्णनकर्ताले आफ्नो विश्वास र त्यस क्षण सम्म पत्ता लगाइएको पथलाई परिभाषित गर्दछ.
त्यो क्षणमा, जब नायकले आफुलाई आफ्नो सामर्थ्य र कमजोरीहरूको साथ पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ, उसले ब्रह्माण्डको आफ्नो अवधारणा परिवर्तन गर्न सक्दछ। थप रूपमा, त्यो विकासको परिणाम व्यक्ति भित्रबाट ट्रिगर भयो २ 23 न्युरल्जिक अन्वेषणहरूको समझसँगको अन्त्य हुन्छ। यहाँ केहि छन्:
त्यस मुद्दाहरूलाई बुझ्नको लागि परिप्रेक्ष्य परिवर्तन गर्न आवश्यक छ जुन त्यस क्षणसम्म स्पष्ट गरीएको छैन।
घाटा सकारात्मक छन्
यो एक अपरिहार्य अवस्था को राम्रो उठाउन सधैं सम्भव छ
"आफैं रिसाउनुहोस् सुन्नुहोस्" एक आत्म-समीक्षा संयन्त्रको रूपमा
शब्द दु: ख अवस्थित छैन
पहिलो पटकको शक्ति
इच्छा कुराकानी छैन
पाठको मुख्य भाग एक व्यक्तिको एक आत्मकथागत किस्सा कथा द्वारा प्रभुत्व जमाएको छ जससँग उसको गुनासोहरू राख्न सक्ने क्षमता छ वा आफ्नो अवस्थाको वर्णन गर्दा उदासी नदेखाउन। यसैले, अर्को महत्वपूर्ण खुलासा भनेको इच्छालाई सुदृढ पार्ने कुराकानीको चरित्र हो। अन्ततः, एस्पिनोसा बताउँछिन् कि क्यान्सरको सामना गरेर मात्र उनले खोज पत्ता लगाउन सके।
थप रूपमा, स्पेनिश लेखकले पहेंलो व्यक्तिलाई चिह्नित व्यक्तिको रूपमा दर्साउँछ जुन उनीहरूसँग मिल्ने प्रत्येक व्यक्तिको चिह्न जान्न मद्दत गर्दछ। अन्तमा, पाठमा त्यस्तै क्लोजर छैन। त्यो अन्तिम भागमा, कथावाचकले आफ्ना पाठकहरूलाई जीवनको नयाँ सुरुवात प्रस्ताव गर्दछ, लेबल बिना, यो बाँच्ने अन्तको इच्छा संग।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कथाहरू » पहेलो संसार